Apple Watch - Apple Watch | Esi m mac
N'ikpeazụ mgbe ogologo ya abụọafọ jupụtara asịrị na ntule banyere omume Apple iWatch, na Isi Okwu Ikpeazụ na Tuesday Septemba 9, 2014 Apple gosipụtara anyị ya igwe igwe. Elekere a anyị niile chere na a ga-akpọ iWatch n'ihi ọtụtụ patents nke Apple nwere na aha a, akpọrọ e Apple Watch ihicha.
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Tim Cook, gosipụtara ya na Isi okwu na Septemba 9, 2014 mgbe akụkọ okwu ụgha nke o mere nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya mgbe mbubreyo Steve Jobs kwuru ya na «Otu ihe ...» Ihe a bụ ihe mbụ maka Tim Cook na akụkọ ntolite ya dị ka onye isi ala Apple ma ọ kwụsịghị ịgba ndị mmadụ anya ka ha gee ntị ọzọ ihe masịrị ha nke ukwuu.
3 Apple Watch ụdị
Apple gosipụtara ọhụụ ọhụụ maka ọhaneze nke ọhaneze ma nwee obi ike ịmalite ụdị atọ dị iche iche na nha abụọdị iche iche afọ maka nkwojiaka nwoke na nwanyi. Ihe nlereanya nke ígwè, ụdị egwuregwu nke aluminom na oku ozo Edition de 18 karat ọla edo.
N'ụzọ dị otú a, Apple na-akwụsị nkọ na asịrị site n'ikwu ihe a na-akpọ na-na zuru okè enyi n'ihi na gị iOS ngwaọrụ na ndị ọzọ kpọmkwem iPhone.
Na m si Mac ị ga - achọta ozi niile na nke mbụ nke wearables nke ụlọ ọrụ nke apụl bitten site na ụbọchị mbụ nke mmalite ya. Enwe obi ụtọ na Apple Watch na ozi gị niile na anyị.
Akwụkwọ ntuziaka nwere mpaghara Apple Watch niile
por Jordi Gimenez eme Ụbọchị 2 .
Ị maara na e nwere akwụkwọ ntuziaka nke ị nwere ike ịhụ ọrụ nke mpaghara ọ bụla nke gị ...
por Ignacio Sala eme 1 izu .
Apple Watch aghọwo ngwaọrụ kachasị mma iji nyochaa ọrụ anụ ahụ na egwuregwu nke ndị ọrụ ....
Apple na-egbu oge ikike iburu kaadị gọọmentị na Wallet ruo 2022
por Toni Cortes eme 1 izu .
Apple mabara n'ime ọdọ mmiri izu ole na ole gara aga na-ekwupụta na tupu ngwụcha afọ, na steeti ụfọdụ ...
Ire ahịa Apple Watch na-aga n'ihu na-eduga n'ahịa dịka nyocha Couterpoint
por Jordi Gimenez eme 1 izu .
Apple smart Watch bịara n'ahịa obere oge mana afọ na-aga n'ihu, ha eguzobewo onwe ha dị ka ndị kachasị ...
The Apple Watch Series 8 agaghị agbanwe imewe ma ọlị
por Jordi Gimenez eme 2 izu .
Tupu ịmalite isi okwu Apple na Septemba gara aga nke ha ga-ewebata anyị na ọhụrụ ...
Apple weputara WatchOS 8.1.1 ma dozie okwu chaja nke Apple Watch Series 7
por Manuel Alonso eme 2 izu .
N'ime awa ole na ole dị iche n'etiti mmalite nke beta ọhụrụ maka Apple Watch, ụlọ ọrụ America nwere ...
Mbupu nke Apple Watch adịghị ada n'okpuru opekempe 5 izu
por Jordi Gimenez eme 4 izu .
N'ezie, ọtụtụ n'ime unu na-akwado akwụkwọ ozi e degaara ndị amamihe atọ n'afọ a ma ị ga-achọ inwe ike ...
Kedu ihe kpatara ihuenyo Apple Watch Series 7 ji bụrụ otu ọ dị
por Manuel Alonso eme 1 ọnwa .
N'otu oge ahụ Apple gosipụtara MacBook Pro ọhụrụ, egosipụtara Apple Watch Series ọhụrụ na ọha mmadụ ...
Ihe ịma aka Apple Watch na-eme mmemme ụbọchị ndị agha agha
por Jordi Gimenez eme 1 ọnwa .
Ihe ịma aka nke ndị agha agha bụ otu n'ime ihe ịma aka ndị Apple na-aga n'ihu na-ahapụ naanị maka ndị ọrụ ...
Otu a ka eriri Nomad Sport Band dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na isi awọ maka Apple Watch
Obi abụọ adịghị ya, ngwa ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ Apple Watch bụ eriri na na ...
Asịrị banyere nnwale glucose ọbara nke Apple Watch Series 8 nloghachi
por Toni Cortes eme 1 ọnwa .
Anyị na-anụ asịrị ruo nwa oge banyere ihe mmetụta ọhụrụ nke nwere ike ịgụnye usoro Apple Watch n'ọdịnihu: a ...
Ọgbọ mbu Apple Watch na Series 1 abụghị otu
Mụọ otu esi ebudata ma wụnye ngwa na Apple Watch gị